नेप्सेको सबै शेयर किन्ने कर्मचारी सञ्चय कोषकाे प्रस्ताव, राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्ला ? - Mero Lagani
फागुन ११,२०७६ / ०८ : २६
नेप्सेको सबै शेयर किन्ने कर्मचारी सञ्चय कोषकाे प्रस्ताव, राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्ला ?
Mero Lagani 2076-10-13
नेपाल राष्ट्र बैकको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को सबै शेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले केन्द्रीय बैंकलाई पत्र लेख्दै शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यस अघि खरिद गरेकै मूल्यमा सबै शेयर खरिद गर्ने मनसाय सहित पत्र लेखेको कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले बताए । 'हामीले यस अघि खरिद गरेकै मूल्यमा शेयर किनिदिने प्रस्ताव सहितको केन्द्रीय बैंकलाई पत्र लेखेका हौं ' गौतमले भने ।
कोषले यस अघि बैंकको १० प्रतिशत शेयर एक हजार ३२ रुपैयाँ दरमा बोलकबोल मार्फत खरिद गरेको थियो । बोलकबोलमा एक संस्थालाई १० प्रतिशतको सीमा लगाईएका कारण उसले १० प्रतिशत मात्रै शेयर खरिद गरेको हो । तर यही सीमाका कारण केन्द्रीय बैंकको सबै शेयर बिक्री भएको थिएन । त्यसपछि कोषले सबै शेयर खरिद गरिदिने मनसाय बनाएको हो । उसले बाँकी रहेको १४ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न सकिने आशयको पत्र लेखेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गत असारमा शेयर बिक्री गर्न बोलकबोल गरेको थियो । बोलकबोलमा कुनै संस्थाले १० प्रतिशत मात्रै शेयर खरिद गर्ने सीमा तोकेको थियो । सोही सीमा भित्र रहेर भदौ दुई गतेसम्म तीन कम्पनीले शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० प्रतिशतको सीमा भित्र रहेर शेयर खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकले पाँच/पाँच प्रतिशत शेयर किनेका थिए । अझै नेप्सेमा केन्द्रीय बैंकको स्वामित्व १४ प्रतिशत छ । जुन शेयर केन्द्रीय बैंकले बिक्री गर्ने भन्दै आएको छ ।
औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र सरकारी प्रतिनिधिले समेत शेयर बिक्री गर्ने बिषयको उठान गर्दै आएका छन् । सोही विषयमा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले अनौपचारिक रूपमा कोषका अधिकारीलाई लाइ पत्र लेख्न आग्रह गरेका थिए । सोही आधारमा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई औपचारिक पत्र लेखेको हो । पत्र लेखिसकेपछि भने केन्द्रीय बैंकले कोषलाई यस बिययमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । उसले यस विषयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको जनाएको छ । यस अघि नागरिक लगानी कोषले समेत शेयर खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उसले बोलकबोलमा भने सहभागिता जनाएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अरू संस्थामा १० प्रतिशत शेयर मात्र राख्न पाउने नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण उसको लगानी रहेका अन्य संस्थाको शेयर समेत घटाउँदै लैजाने रणनीति केन्द्रीय बैंकको छ ।